भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको बोर्ड परिबर्तन #CancerHospital • Health News Nepal
भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको बोर्ड परिबर्तन #CancerHospital
पहिले यो अस्पताल गैर सरकारी संस्थाले ब्यवस्थापन समिती चलाउदै आईरहेको थियो।
भक्तपुर, १३ पुष २०७७
नेपाल सरकारको स्वामित्व आएपछि भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको बोर्ड परिबर्तन भएको छ।
अब बोर्डमा “नेपाल सरकार. स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल” लेखिएको छ ।
गैर सरकारी सँस्थाले ब्यवस्थापन समिती चलाउदै आईरहेको थियो। भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल बिकास समितिका अध्यक्ष तथा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा.दिपेन्द्र रमण सिंहको अध्यक्षतामा ब्यवस्थापन समितिको गठन गरिएको छ । सो गठन आदेश पछी पुर्ण रुपमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको छ ।
मन्त्री परिषदको निर्णयले प्रा. डा बिष्णु दत्त पौडेललाई कार्यकारी निर्देशक समेत नियुक्त गरेको छ ।
Tags: #government of Nepal#Health and population ministryBhaktpur cancer HospitalBoard ChangeCorona Virus #Covid19Dr.Bishnu Datta Paudel
कोभिड १९ ले सिर्जना हुने मनोबैज्ञानिक असर न्यूनीकरण गर्न मानोपरामर्श तालिम #Covid19
विश्वभर कोरोना संक्रमण हुनेको संख्या २१ लाख पुग्यो।
काठमाडौंमा ३ जना लगायत ७२ जनामा कोरोनाको पुष्टि , कुल संख्या ६७५ पुग्यो #Covid19